Nbudata Royale Legendary maka gam akporo [LR Game] - Luso Gamer
Nbudata Royale Legendary maka gam akporo [Egwuregwu LR]
A na-ahụta Clash Royale dị ka onye ga-anọchi Clash of Clans. A na-edobe mkpụrụedemede na njirimara ndị ahụ otu mana n'ime CR a na-agbakwunye ụlọ elu na mgbakwunye. Agbanyeghị, ọtụtụ akụrụngwa pro enwere ike iru bụ akpọchiri akpọchi. Iji kporie ndụ akụrụngwa na-akparaghị ókè anyị wetara Legendary Royale.
N'ezie, n'ime ụdị mod a, njirimara pro niile gụnyere akụrụngwa na-akparaghị ókè. Nke pụtara ugbu a, ndị na-egwu egwuregwu anaghị achọ ka ha chegbuo onwe ha maka isi ihe. Nke na-enyere ndị egwuregwu aka iwulite ndị agha dị ike na ọgwụ.
N'ihi na ihe niile isi akụrụngwa gụnyere bara nnukwu uru, mkpụrụ ego na ihe agha ka edobere ruo njedebe ikpeazụ. Yabụ na ike agwụla gị n'ịkpọ ụdị ọrụ gọọmentị na-achọ ụdị egwuregwu egwuregwu gbanwetụrụ. Mgbe ahụ anyị na-akwado ndị egwuregwu ịwụnye LR Egwuregwu Mod.
Kedu ihe bụ Legendary Royale Apk
Legendary Royale gam akporo bụ ụdị gbanwetụrụ nke Royale Clash gọọmentị. Ebe akụrụngwa na ihe ndị dị oke ọnụ ahịa emeghere iji. Ewezuga akụrụngwa bụ isi, ndị dike na nhọrọ ndị ọzọ dị mkpa nwere ike imezigharị.
Mgbe anyị nyochara ụdị ngwa egwuregwu gọọmentị. Anyị hụrụ na egwuregwu a mara mma ma na-egbochikwa ya. N'ihi na ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị a ga-enweta n'ime egwuregwu ahụ bụ nke e ji mara n'ime nchekwa na igbe mmachi.
Mgbe ịnweta igbe ndị ahụ na nchekwa ga-ekwe ka ndị egwuregwu nwee ike ịnụ ụtọ ihe onwunwe. Imeghe igbe ndị ahụ chọrọ akụrụngwa ndị dị ka mkpụrụ ego ọla edo na bara nnukwu uru. Na-enweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndị a ga-ebelata ohere nke imeghe igbe.
Iji nweta bara nnukwu uru ole na ole ahụ nwere ike ịchọ itinye ego ọtụtụ narị dollar. A na-ewere nke ahụ dị oke ọnụ na enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka ndị na-egwu egwuregwu. N'ihi ya, n'ịtụle ego na arịrịọ ndị egwuregwu, ndị mmepe wetara LR Apk.
aha Royale akụkọ ifo
Mmepụta Super Slash
Aha ngwugwu com.superslash.coreroyale
Category Egwuregwu - Strategy
Nke bụ free download si ebe a na otu click nhọrọ. Usoro ntinye na egwu egwuregwu mod dị mfe. Nke mbụ, a na-arịọ ndị egwuregwu ka ha budata ngwa egwuregwu mod kachasị ọhụrụ site na iji otu pịa nhọrọ.
Ozugbo nbudata zuru ezu, ugbu a na-amalite echichi usoro na-enwe pro akụrụngwa. Cheta ịnweta dashboard isi agaghị achọ ndebanye aha ma ọ bụ ndenye aha. Ọ ga-akpaghị aka na-enye ohere ozugbo na isi gameplay.
Akụrụngwa pro nke enwere ike ịnweta n'ime egwuregwu egwuregwu mod bụ bara nnukwu uru, mkpụrụ ego ọla edo na ebe agha. A na-edobe ọnụọgụ niile ka ọ bụrụ oke. Ọbụna counters ga-ọhụrụ ka gamers malite gameplay ma ọ bụ malitegharịa ya.
Cheta iji otu ihe bara nnukwu uru na mkpụrụ ego ọla edo, ndị egwuregwu nwere ike imeghe ihe ndị ahụ dị ka nnukwu igbe. Ịkpọghe igbe ndị ahụ ga-enyere aka nweta ụgwọ ọrụ na-adịghị agwụ agwụ dị ka ndị dike, ngwá agha na mmetụta. Otu ihe ọzọ, ụgwọ ọrụ enwetara ga-atụkwasịrị na dashboard na-akpaghị aka.
Nhọrọ ọtụtụ ọkpụkpọ ka dị ndụ ma na-akwado egwuregwu egwuregwu ahụ n'elu ihe nkesa nkeonwe. Nke a pụtara na a kpochapụrụ nsogbu mmachibido iwu ma ọ bụ ndetu ojii. N'ihi ya, ị hụrụ egwuregwu n'anya ma dị njikere iso ndị enyi gwuo wee wụnye Legendary Royale Download.
Ngwa egwuregwu bụ n'efu ka ibudata.
Ọ dị mfe ịwụnye na igwu egwu.
Ịgwakọta ngwa egwuregwu na-enye akụrụngwa na-enweghị ngwụcha.
Ndị ahụ gụnyere mkpụrụ ego ọla edo, bara nnukwu uru na BP.
A ga-emegharị counter ahụ ka ndị egwuregwu malitegharịrị egwuregwu ahụ.
A na-edobe interface egwuregwu egwuregwu yiri nke mbụ.
A na-eji sava nkeonwe maka egwuregwu nnabata.
Otu esi ebudata Royale Legendary
Kama na-awụlikwa elu ozugbo kwupụta echichi na itinye n'ọrụ nke egwuregwu ngwa. Nzọụkwụ mbụ bụ nbudata na maka ndị ọrụ gam akporo nwere ike ịtụkwasị obi na weebụsaịtị anyị. N'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị, anyị na-enye naanị ezigbo faịlụ Apk mbụ.
Iji jide n'aka na ndị egwuregwu ga-eji ngwaahịa ziri ezi na-atụrụ ndụ. Anyị wụnye egwuregwu n'elu dị iche iche smartphones. Mgbe ị wụnye egwuregwu ahụ na ngwaọrụ dị iche iche, anyị hụrụ na ọ dị nchebe iji wụnye na igwu egwu. Iji budata ngwa egwuregwu mod mod biko pịa njikọ enyere n'okpuru.
Ọ Dị Mma Iji Wụnye Mod Apk
Tupu ịnye faịlụ Apk n'ime ngalaba nbudata, anyị etinyelarị egwuregwu mod na ngwaọrụ dị iche iche. Na enweghị ike ịhụ okwu ọ bụla siri ike. Agbanyeghị, anyị anaghị amanye ndị egwuregwu ka ha wụnye egwuregwu mod. Ọbụlagodi anyị enweghị nwebiisinka, yabụ wụnye ma kpọọ egwuregwu mod n'ihe egwu nke ha.
Ụdị Clash Royale dị iche iche nwere ike ibudata na webụsaịtị anyị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-egwu ndị ọzọ mod egwuregwu mgbe wụnye na-eso Apk si. Kedu ndị bụ Nna-ukwu Royale Apk na Master Royale DM Apk.
Yabụ na ị na-enwe mmasị ka gị na ndị enyi gị kpọọ Clash of Royale mana enweghị ike ịsọ mpi n'ọgbọ agha n'ihi enweghị ahụmịhe na akụrụngwa. Mgbe ahụ, echegbula n'ihi na ebe a anyị na-a azụ na a modded game. Ugbu a ịwụnye Legendary Royale ga-enyere ndị egwuregwu aka ịnụ ụtọ akụrụngwa na-adịghị agwụ agwụ.
Categories Strategy, Egwuregwu Tags Royale akụkọ ifo, Akụkọ mgbe ochie Royale Android, Royale Apk, Nbudata Royale akụkọ mgbe ochie, Egwuregwu Mod Mail igodo
Budata Cute Cut Pro maka gam akporo [2022 kacha ọhụrụ]
Otu esi ebudata PES 16 Apk n'efu maka gam akporo 